Mhlawumbe akukho muntu ababeyoba ekuphileni kwakhe sibhekene amadivaysi, ukuklanywa okubandakanya tube cathode ray (noma CRT). Manje izixazululo efanayo ukukhuthalele esikhundleni wuhlelo nozakwabo ngaphezulu yesimanje esekelwe liquid crystal display (LCD). Nokho, zikhona eziningi izindawo lapho tube cathode ray namanje esisemqoka. Ngokwesibonelo, e ephezulu ukucacisa oscilloscopes LCD ayikwazi ukusetshenziswa. Nokho, kunento eyodwa ecacile - ulwazi kuyaqhubeka isibonisi kudivayisi kuyogcina kubangele kuhluleke ngokuphelele we CRT. Kuyindaba isikhathi.
Cathode ray tube: umlando nesenzakalo
Owathola bangase bacabange Yu Plucker, okuyinto ngonyaka 1859, ukutadisha ukuziphatha izinsimbi kanye nemiphumela ehlukahlukene zangaphandle, into wathola ngemisebe (ekushayweni) izinhlayiya aphansi - electron. Kwakheka kuyizinhlayiyana imishayo nabizelwa cathode imisebe. Wabuye yabhekisela ukubukeka ekushayweni izinto ezithile (phosphor) lithintana nalaba bantu imishayo electron ebonakalayo. CRT Modern uyakwazi ukudala isithombe ngenxa lezi zinto ezatholakala ezimbili.
Ngemva kweminyaka engu-20, kuye kwatholakala empirically ukuthi isiqondiso motion electron sasikhipha zingalawulwa ngu inkambu zangaphandle kazibuthe. Lokhu kalula wachaza uma sikhumbula ukuthi omubi icala abathwali libhekene lokuhambisa kazibuthe kanye kagesi.
Ngo-1895, uKarl F. Braun elicwengisiswe ukuphathwa tube, futhi ngaleyo ndlela wakwazi ukushintsha Vector we kuyizinhlayiyana ukugeleza isiqondiso akuyona nje ensimini kohlelo, kodwa futhi nesibuko ekhethekile kungenziwa rotated, okuyinto kwavulela amathemba entsha ngokuphelele ukusetshenziswa icebo. Ngo-1903 godu Venelt ibekwe ngaphakathi electrode tube cathode ngesimo a isilinda, okwenza kube lula ukulawula umfutho yokucucuza sasikhipha.
Ngo-1905, u-Einstein azithola washayelwa equation for kuhlaziywa umphumela Photoelectric, futhi ngemva kweminyaka engu-6 liye wabonisa egijima kudivayisi ukudluliswa image buqamama. Beam kwakuqondiswa amandla kazibuthe, kanye capacitor ophethe ukubaluleka ukugqama.
Phakathi kokuqala zokukhiqiza models lokuqala CRT umkhakha kwaba akulungile ukwenza izikrini nge idayagonali emikhulu, ngakho ebabaza lens esetshenziswa njengoba ukusilela.
Iinsetjenziswa cathode ray tube
Kusukela kudivayisi kushintshiwe, kodwa izinguquko obuphathekayo benkolelo yazo ezindaweni emvelo, njengoba akukho ngokuyinhloko entsha ngokuhamba umsebenzi zengezwe.
Glass umzimba uqala nge screen oyindilinga tube isandiso obumba. Amadivayisi umbala isithombe, ebusweni kwangaphakathi camera nge isinyathelo ezithile ezintathu izinhlobo phosphors (Red, Green, Blue), enika umbala luminescence ngesikhathi ugongolo electron ingena. Ngakho, kukhona ezintathu cathode (izibhamu). Ukuze Zikhipha electron defocus futhi ahlinzeke ofiselekayo ugongolo zamanje ngokufaka iphuzu oyifunayo esikrinini phakathi cathode futhi isistimu phosphor ungqimba ahlelwe Amabha steel - buso. It ingafaniswa ne-stencil, uyakunquma zonke engadingekile.
On kobuso evuthayo cathode electron ekushayweni iqala. Bagijimela bubheke anode (electrode nenkokhiso positive), exhunywe kwi-ingxenye oyindilinga tube. Ngaphezu kwalokho, imishayo bagxile ikhoyili akhethekile awela emkhakheni kohlelo kuka. Kudlulwa grate kuwa on iphuzu oyifunayo esikrinini, okubangela ukuguquka yayo energy kinetic ningene ekukhanyeni.
Abaqaphi nge cathode-ray tube kabanzi computer. Ukuba lula design, enokwethenjelwa, umbala olunembile, futhi akukho ukulibaziseka (okufanayo amasekhondi amancane impendulo-matrix LCD) - lokhu inzuzo yabo eyinhloko. Muva nje, Nokho, njengoba sekushiwo, lo CRT is abangenamakhaya ukonga ngaphezulu futhi ergonomic LCD Abaqaphi.
Indlela ukukhetha umamukeli umculo: ukubuyekeza models engcono kanye nokubuyekeza
Iphansi "eliphansi", noma ukuchithwa kwe-Soundproofing ngaphezu kwakho konke!